ကုန်ပစ္စည်းစနစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗီဒီယို NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ကုန်ပစ္စည်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်, ဗီဒီယို
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ကုန်ပစ္စည်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်, ဗီဒီယို
ရာထူး: ကုန်ပစ္စည်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်, ဗီဒီယို
Comcast ရဲ့ TPX (Technology.Product.Xperience) အဖွဲ့အစည်းကမီဒီယာနဲ့နည်းပညာ၏လမ်းဆုံမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်အသင်းများကိုအစဉ်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုအသွင်ပြောင်းကြောင်းထုတ်ကုန်ပို့ဆောင်နေကြသည်။ အဆိုပါ X1 platform ပေါ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောဟောပြောချက်လမ်းညွှန်အဖြစ်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များမှ TVGo တူသော apps များဖန်တီးခြင်းမှကျနော်တို့ပျော်စရာသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးအားလုံးပလက်ဖောင်းအနှံ့လက်လှမ်းဖြစ်ကြောင်းအံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်၏လိုက်စားအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့်တစ်ဦးအပြုသဘောသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကိုလည်းလာမယ့်မျိုးဆက်စားသုံးသူစနစ်များနှင့်နည်းပညာများ, အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အင်ဂျင်နီယာကွန်ယက်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု, ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများအပါအဝင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောကွန်ယက်ကိုဗိသုကာဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ထောက်ခံပါတယ်။
သငျသညျဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့် software န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အသည်းအသန်ဖြစ်ပါသလား သငျသညျကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကြိုက်ပြီးအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်အဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းအလုပ်လုပ်နေသလား? တစ်စနစ်များအင်ဂျင်နီယာကွန်ပျူတာများ, virtualization, သိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ယက်ဖြေရှင်းချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသကဲ့သို့သငျသညျအိုင်ပီကိုဗီဒီယိုနည်းပညာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုများအတွက် (စုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဃ်းတိမ်ကိုဖြေရှင်းချက်တက်အောင်)? ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားပြန်ဖွင့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းပြဿနာများဖြေရှင်းရေးအပေါ်ရှင်သန်ပါနဲ့သင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည် နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်များ architecting, ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ သင်တို့သည်လည်းထုတ်လုပ်မှု enviroments မှာ IP ကိုဗီဒီယိုက Workflows ထောက်ပံ့အားလုံးစနစ်များအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ပလက်ဖောင်းများ, virtualization, သိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ရက်ဖြေရှင်းနည်းများတွက်ချက်နှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြလိမ့်မည်။ ဒီအခန်းကဏ္ဍ၌သင်တို့လည်းဗွီဒီယိုမိုဃ်းတိမ်သည်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်နေထိုင်သူဘာသာရပ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါဗွီဒီယိုပလက်ဖောင်းအခြေခံအဆောက်အအုံအသင်းအဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေအတွက်တီထွင်ဆန်းသစ်နေသောကမ္ဘာ့အဆင့်မီကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ရွေ့လျားအဖွဲ့ကဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုများ, ရလဒ်များကို, အရည်အသွေးအပေါ်ဆိုရမှာပါကြောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, agility.Who နှင့်အတူ theSystems Engineerwork သနည်းအဆိုပါစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်ခြုံငုံ IP ကိုဗီဒီယိုကအင်ဂျင်နီယာအသင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် positioned နှင့်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရှုထောငျ့နှင့်အတူအလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်တယ်ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ကအဓိကအခြေခံအဆောက်အဦများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသင်း, အရည်အသွေးအာမခံချက်အဖွဲ့များ, ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းအဖွဲ့များနှင့်နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကွန်ယက်ကိုအင်ဂျင်နီယာများ, စနစ်များကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများနှင့်တစ်ဦးပုံနည်းပညာပိုင်း-အစွမ်း-ပေမယ်--အမှန်တကယ်-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ထုတ်ကုန်ရှေးရှေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါစနစ်များကိုအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကဆော့ဖျဝဲအင်ဂျင်နီယာများ, စနစ်များကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ကွန်ယက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ရုပ်သေး developer များနှင့်အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေအရည်အသွေးကိုအာမခံချက်အင်ဂျင်နီယာများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကအင်ဂျင်နီယာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ခံမှုအသင်းများအားဖြင့်ကြုံတွေ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းမှကြွလာသောအခါပြီးခဲ့သည့်စကားလုံးနေသောအတွေ့အကြုံရှိနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ထဲတွင်၏အုပ်စုတစုပါပဲ။ သင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်တချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲ? သင့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ, သင်အမျိုးမျိုးသော application ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတသင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများစီမံခန့်ခွဲမှု, ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့များအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျမိုဃ်းတိမ်သည်အခြေခံအဆောက်အအုံအစိတ်အပိုင်းများ၏ဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်းဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ အခြားအအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များနှင့်အတူပူးပေါင်းနေစဉ်စနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်သကဲ့သို့သင်တို့စနစ်များအင်ဂျင်နီယာများကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု enviroments မှာစနစ်များအစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ကျက်အလျင်တိုးတက်စေရန်အကြံပြုချက်များသည်။ IP ကိုဗီဒီယိုကန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့သည်မိုဃ်းတိမ်အခြေခံအဆောက်အဦများအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးတက်လာဖို့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သွားစေ။ အမျိုးမျိုးသောအခြေခံအဆောက်အအုံအစိတ်အပိုင်းများကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်သက်သေခံဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်မှုပေးခွငျးအားဖွငျ့ပိုကောင်းထောက်ခံမှုဖွံ့ဖြိုးရေး, ပေါင်းစည်းမှုအင်ဂျင်နီယာနှင့် QA သို့သင်းမှဦးဆောင်ယုံကြည်စိတ်ချရအစပျိုး။ Generate နှင့်စနစ်များဗိသုကာများ၏စာရွက်စာတမ်းများမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြ, စနစ်များဖြေရှင်းနည်းများ, configurations နှင့်ဗွီဒီယိုပလက်ဖောင်း Infrastructure.Where များအတွက်ဖြေရှင်းရာမှာလမ်းညွှန်သင်တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သနည်းသင်ကအကြီးစားမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံသည့်ဗီဒီယိုကိုထုတ်လှိမ့်ဖို့ Comcast အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အတောက်ပစိတ်နှင့်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ဒီအခန်းကဏ္ဍအတွက် television.Success ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ပါဝါလိမ့်မည်ဟုပေးပို့အခြေခံအဆောက်အအုံနည်းပါးလာဖောက်သည်-facing ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ပြတ်တောက်အတူစျေးကွက်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့မြန်နှုန်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်များ:
ဗိသုကာ, ဒီဇိုင်း, အကြံပြုဖွံ့ဖြိုး, အကဲဖြတ်ရန်နှင့်အဆင့်မြင့်အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုနည်းပညာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖြန့်ကျက်ကိုထောကျပံ့ဖို့နည်းပညာဆိုင်ရာစနစ်များအခြေခံအဆောက်အအုံဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော။
လက်စွဲစစ်ဆင်ရေးကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းအလိုအလျောက်၏ဖြန့်ကျက်, သုတေသနနှင့်တိုးပွားအတွက်ကူညီပေးဖို့ပံ့ပိုးမှုပလက်ဖောင်း CI / CD ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစပျိုး။
မျိုးစုံ Cross-functional ဖြစ်စေဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များအတွင်းတစ်ဦးအခြေခံအဆောက်အအုံဘာသာရပ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်သူ၏အခန်းကဏ္ဍကိုယူဆ။
စီမံကိန်းများအပေါ်ပလက်ဖောင်းအခြေခံအဆောက်အအုံအဖွဲ့ကိုယ်စားပြုပြီးအသင်းအရင်းအမြစ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုလုပ်ဆောင်နှင့် / သို့မဟုတ်အဖြစ်သင့်လျော်သောဦးတည်သွားစေ။
Viper IP ကိုဗီဒီယိုကအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များများအတွက်တသမတ်တည်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပေး, Self-ဝန်ဆောင်မှုအရင်းအမြစ်စီမံလုပ်ကိုင်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးကယ်နှုတ်။
ပုံမှန်စနစ်အစာရွက်စာတမ်းများ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ကားချပ်များနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထား
အဆင့်မြင့်စနစ်များအင်ဂျင်နီယာ related ဒီဇိုင်းများ, အဆင့်မြှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း Perform ။
မျိုးစုံအခြေခံအဆောက်အအုံ domains များအဘို့အစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဦးဆောင်လမ်းပြ။
စနစ်များဝန်, အမှားသည်းခံစိတ်, အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်ခြင်း၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်သေဒဏ်စီရင်။
အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု enviroments မှာအသုံးပြုရန်အတွက်အသစ်သောနည်းပညာများကိုသက်သေခံပြီးဖြစ်သည်။
ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက်အဆင့်3နှင့်အထက်အခန်းကဏ္ဍကိုဖြည့်ဆည်း။
ဒီနေရာတွင် Viper ပလက်ဖောင်းအင်ဂျင်နီယာအတွင်းသုံးစွဲဖို့မြျှောလငျ့နိုငျတိကျတဲ့နည်းပညာများအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
Operating Systems က & Applications ကို
CentOS, CoreOS Linux ကို
Jira & မြစ်ဆုံ
VMware က vSphere, vCenter, vCloud, vRA
Compute & သိုလှောင်ပလက်ဖောင်းများ
Cisco က UCS
ဖြန့်ဝေ Object ကိုသိုလှောင်
Cleversafe Object ကိုသိုလှောင်
ကျွမ်းကျင်မှု & လိုအပ်ချက်များ
လက်ပေါ်စနစ်များကိုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာအတှေ့အကွုံ5+ နှစ်ပေါင်း။
အနိမ့်3+ အကြီးစားဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် convergence ပလက်ဖောင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း။
ခိုင်မာတဲ့အတွေ့အကြုံလိုအပ်ချက်များကိုစုဆောင်းကာခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတသင်း supporting ။
စနစ်ကဒီဇိုင်းများ, စွမ်းရည်, လမ်းမြေပုံများနှင့်သယံဇာတခွဲဝေန်းကျင်ရွယ်တူများနှင့်သက်ဆိုင်သူများနှင့်အတူပူးပေါင်းခိုင်မာတဲ့စွမ်းရည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံ sizing နှင့် application ဝန်နှင့်ဝယ်လိုအားတို့အပေါ်မှာမှီခိုချုံ့ချဲ့အတူအားကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကို။
ထိုကဲ့သို့သော Python ကို, Bash, ရုပ်သေးအဖြစ် Unix / Linux ကိုအလိုအလျောက်နှင့် scripting language အမျိုးမျိုးနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို။
(F5 LTM နှင့် GTM, IPVS) ဟန်ချက်ညီ Cluster, ဝန်အပါအဝင်အမြင့်ရရှိနိုင်မှုအတှေ့အကွုံ။
ထိုကဲ့သို့သော NetApp (7-mode ကိုနဲ့ Cluster Mode ကို) အဖြစ်နှစ်လယ်ပိုင်းနှင့်မြင့်မားသောအကွာအဝေးသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှု။
VMware က5/ 6, CoreOS / Docker / Kubernetes
DNS ကို, DHCP, PXE တစ်ပြိုင်နက်နှင့် Apache ကို / သည် HTTP
Blade ကို server ကိုဗိသုကာ, Generic Compute ပလက်ဖောင်းများ
NAS / NFS / Object ကိုသိုလှောင်မှုနည်းပညာ
သစ်ပင် spanning VLAN, LACP, vPC / MLAG TCP / IP ကို, Multicast, unicast အပါအဝင်အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အတွေ့အကြုံကို။
OpenStack cloud computing နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို။
CI / CD ကိုနည်းစနစ်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံကို။
က Hyper-convergence နှင့်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများအခြေခံအဆောက်အအုံ၏အသိပညာ။
စနစ်များကိုဒီဇိုင်းနှင့် configuration တိုးတက်မှုအဆိုတင်သွင်းဖို့စွမ်းရည်။
ပြဿနာများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု ယူ. စနစ်များကိုအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများအားလုံးကိုအရေးအခင်းများအတွက် resolution ကိုမှသူတို့ကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှုဖို့လိုလိုလားလား။
Comcast တစ်ခု EOE / စစ်ပြန် / မသန်စွမ်း / လိင်တူချစ်သူအလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါသည်
ပေါင်းစည်းမှု လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-04-30
ယခင်: Lynx Technik အရောင်းရေးအဖွဲ့အပြင်ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Presteigne ချဲ့ Continue မှဗိုလ်မှူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို